ओबामाको विदाइ भाषणमा आँसु
अन्नपूर्ण बुधवार, पुस २७, २०७३ 53557 पटक पढिएको
अमेरिकाः कहिलेकाही मालिया र साशाले लाजमर्दो खालको फजुल खर्च गरेको आरोप अमेरिकन जनताले लगाउने गर्थे । छोरीहरु मालिया र साशा बाराक र मिसेलका आफ्नै सन्तान नभएको हल्ला पनि बेलाबेलामा पश्चिमा मिडियाले चलाए । मिसेल ओबामा गर्भवती भएको फोटो कहिल्यै सार्वजनिक नगरेको भन्ने तर्क पश्चिमा मिडियाको थियो । छोरीका कारण यी दम्पत्तिको सम्बन्ध विच्छेद हुन लागेको निराधार हल्ला पनि बेला बेलामा चले । उनीहरुले यसको बारेमा कहिल्यै मुख खोलेनन् ।
ओबामा दुई पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका भाग्यमानी अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । ओबामाले गरेको विदाइ भाषण लोकप्रिय बन्यो । आफूले गरेका प्रतिज्ञाहरु केही पूरा भए पनि केही अधुरा रहेको अमेरीकी सामू स्वीकार गरे । तर, अमेरिकी नेतृत्वमा नाटकीय परिवर्तन भएको भन्ने विचार राखे।
अबको दश दिन उनको ठाउँमा फेरिन लागेका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा भने केही मुख खोलेनन् । बरु आफूले शान्तिपूर्ण रुपमा एउटा राष्ट्रपतिबाट अर्को राष्ट्रपतिमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताए ।
आफनो कार्यकालमा अमेरिका झनै बलियो र सुदृढ भएको दाबी ओबामाले गरे । सँगै ओबामाले मुस्लिमलाई भेदभाव नगरेको, आफनो मुलुकमा कुनै पनि आतंककारी आक्रमण नभएको चीन, रसिया जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकले अमेरीकाको विश्वमा रहेको प्रभावलाई बिथोल्न नसक्ने दाबी पनि गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मंगलबार राष्ट्रपतिका रुपमा अन्तिम मन्तव्य दिने क्रममा आफ्नो कार्यकालका विषयलाई बेलिविस्तार लगाए । उनले यो बिदाई भाषणका क्रममा आफ्नो कार्यकाल सफल बनेको दावी गरे।
हामी सबैबीच बाहिरीरुपमा भिन्नता देखिएपनि समग्रहमा हामी सबै सँगै छा तर अन्धभक्त जातीवाद र असमानता प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता विरुद्ध चुनौति भएकाले सहकार्यगर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ, राष्ट्रपति ओबामाले भने, ‘हामी एक्लै आयौँ र एक्लै जाने छौँ ।’
उनले मुलुकको आर्थिक प्रगति, इरानसँगको परमाणु सम्झौता, क्यूवासँगको सम्बन्धको पुनःस्थापना र समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने लगायतका काम आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धि भएको उक्त अवसरमा बताए।
‘हामी जृन पार्टीका भएपनि हामी लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा जुट्नुपर्छ, ओबामाल भने । प्रजातन्त्रताका चुनौतीसँग शाक्तिको प्रयोगभन्दा अधिकार तथा बौद्धिकता र परिश्रममाथि विश्वासले नै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मुलुकको गम्भीर आर्थिक मन्दीको समयमा फासिवाद र निरङ्कुशता प्रतिको आकर्षणलाई प्रतिवाद गर्न मद्दत गरेको थियो र यही विचारले अन्य विश्व समुदायसँग मिलेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि अघि बढ्न प्रेरणा दिएको थियो, सम्बोधनका क्रममा उनले बताए ।
राष्ट्रपति ओबामाले रसियाको सहयोगमा ट्रम्पलाई हवाइटहाउस पुर्याइएको भन्ने चर्चालाई सङ्केत गर्दै फासिवाद र निरङ्कुशता प्रतिको आकर्षण प्रजातन्त्रका लागि चुनौति हुनसक्ने पनि बताए । एजेन्सी
प्रधानमन्त्री आज भारत जाँदै 737
नेपाल-भारत वार्ता : पञ्चेश्वर असफल 4034
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 45089
नेपाल-भारत सम्बन्धका अहम् सवाल 418
टुलु-टुलु, निष्ठुरीको स्वतन्त्र प्रेस ! 1310
बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रचण्डले दिए देउवालाई चेक 800
सर्पको टोकइबाट एकको मृत्यु 202
अध्यागमनको फन्दामा नक्कली खेलाडी 2448
'गोडा गुम्यो, गैंडा नगुमोस्' 1480
फेसबुकका सिइओ मार्क जुगरवर्क फेरी बुवा बन्‍दै 8017